81 बर्सिय वृद्धको मनै रुवाउने कहानी, कुकुर बाध्ने साङ्लोमा बाधिएर जीवन बिताउदै यो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला! – Complete Nepali News Portal
81 बर्सिय वृद्धको मनै रुवाउने कहानी, कुकुर बाध्ने साङ्लोमा बाधिएर जीवन बिताउदै यो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला!
ScotNepal November 10, 2019
मोरङको मधुमल्लामा रहेका एक परिवारको कथा अनि ब्यथा यस्तो छ कि जो सुन्दा हरेक मान्छेको मन रुन्छ । एकासी बर्सिय वृद्ध बुबा जसले आफुले बुढेसकालमा छोराछोरीको स्याहार सुसार पाएर बस्नुपर्ने हो तर बिडम्बना एकासी बर्षका बुढा मान्छेले आफ्ना बाउन्न बर्षका छोरालाई फलामको कुकुर बाध्ने साङ्लोले बाधेर रेखदेख गर्नुपरेको छ । एकदमै दयनीय अवस्था छ । आफू दिनभर कुकुर बाध्ने साङ्लोमा बाधिएर बसेका मान्छेलाई थाहा छैन कि म को हो भन्ने केही होस नै नभएका उनी बेहोसीमा हिड्ने गरेपछी कुकुर बाध्ने साङ्लोले बाधेर बुढा बुबाले हेरचाह गर्न थाले । केही महिना पहिले साङ्लोले नबाधेको बेला भागेर दुई महिना हराएका थिए । उनीहरु तीन जना दाजुभाइ छन तर सबै अशक्त र अपांग जेठालाई साङ्लोले बाध्नुपरेको छ माइला सुस्त मनस्थिति कान नसुन्ने र कान्छा अशक्त छन ।
आमाको पनि केही बर्ष पहिला निधन भएपछी बुबाले रुदै आफुले एकासी बर्षको उमेरमा गर्दै गरेको दुख सुनाएर धुरु धुरु रोए । समयमा उपचार नपाएपछि छोरो ठिक नभएको बताउने बुबा भन्छन सन्सारमा पैसा बिना केही नहुने रहेछ । आफू गरिब त्यसमाथि काम गर्न नसक्ने भएपछि छोराको उपचार त परको कुरा खान लाउन पनि धौ धौ परिरहेको बताउछन बुबा । बुढेसकालमा कोहि सहारा नभएका वृद्ध बुबा बेला बेला मलाई यो कुन जन्मको पापको सजाय दिदै छौ भगवान भन्दै एक्लै रुन्छन ।
सबैको दसै आउदै छ सबै खुशी छन तर यी बुढा बुबाको दुख कस्ले देख्ने ? खान पनि नपुग्ने दुखको सागरमा डुबेको परिवारलाई कसैले केही सानो सहयोग गर्दा त्यो सानो सहयोग दुखी परिवारलाई ठूलो सहयोग हुनेछ । कलाकार तथा सन्चारकर्मी समीर सुवेदी र उनको सुपर अनलाइन टि भि परिवार त्यहाँ पुगेर सबैमाझ बुबाको दुख पुर्याउने कोसिस गरेका छन । 81 बर्सिय बुबाका छोराको मानसिक अवस्था ठिक नभएकाले बाधेर राख्नु परेको छ । आर्थिक अभावका कारण छोरालाई औसधि उपचार गर्न पाएका छैनन । कसैले सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने 9814930736 मा सम्पर्क गरेर गर्न सक्नुहुनेछ । आफू एकासी बर्षका भएर पनि 52 53 बर्षका छोरालाई साङ्लोमा बाधेर स्याहार गर्दै गरेका बुबाले भावुक हुँदै आफ्ना दुख यसरी बताए तल भिडियोमा हेर्नुहोस तपाइको मन रुनेछ
भाइरल झाँक्रीको आत्मा बोलेको होइन झुट हो भनेपछी मध्यरातमा पर्यो...
भद्रकाली मन्दिरमा धर्ती माताको पाँचौ दिनमा यस्तो अचम्म भयो, दरबार...
सर्प बिज्ञले यसरि पक्रनु पर्छ सर्प भनेर सिकाउँन खोज्दा करेट...
चिम्पान्जीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको भन्दै महिलालाई चिडियाखानामा प्रतिबन्ध
मिस नेपाल नर्थ अमेरिका २०२१ को बिजेता बनिन गरिमा ज्ञवाली